စဈတပျဘောမ ယုနျလေးကို ထိမိပိုငျနိုငျတဲ့ စကားလုံးဖွငျ့ ဒဲ့ဆဲခလြိုကျတဲ့ မငျးမျောကှနျ - Cele Fans
HomeCelebrityစဈတပျဘောမ ယုနျလေးကို ထိမိပိုငျနိုငျတဲ့ စကားလုံးဖွငျ့ ဒဲ့ဆဲခလြိုကျတဲ့ မငျးမျောကှနျ
April 23, 2021 Cele Fans Celebrity 0
ပရိသတျကွီးရေ ယုနျလေးဆိုတဲ့ ပါလရောငါးပိခကျြကတော့ ပွနျပျေါလာပွနျပါပွီနျော။ သူလုပျသမြှတှကေ လူတှအေဆဲခံရအောငျကို တမငျလုပျနသေလိုပါပဲ။
အခုလညျး မငျးသားမငျးမျောကှနျးက သူ့ရဲ့လုပျရကျတှကေိုမကျြဝါးထငျထငျမွငျတှလေို့ကျတာကွောငျ့ ထိမိစှာဖွငျ့ ဆဲလိုကျပါပွီ။
ယုနျလေးကလညျး သူ့အပျေါဆဲဆိုနတေဲ့ မငျးမျောကှနျးကို ဆရာကွီးလုပျကာ ပွနျပွောလိုကျပွနျပါပွီ။
” ဒါကြှနျတျော အခဈြဆုံး အဈကို ထဲက တဈယောကျ ကိုမငျးမျောကှနျးပါ . ကြှနျတေျာ့ကို အမွဲတမျးအားပေးတယျ .ငါတို့ အားလုံးရဲ့ မွေ သီခငျြးတုနျးကလဲ ကြှနျတေျာ့ ဘကျမှာ ရှိခဲ့တဲ့ အဈကိုပါ တခွားလူတှေ ဝိုငျးဆဲတာ ဘာမှမဖွဈဘူး ခံနိုငျရညျရှိတယျ
အရညျထူနပေါပွီ ကိုယျခဈြတဲ့လူတှေ ဆဲတာတော့ စိတျထိခိုကျပါတယျ အဈကို ကြှနျတျော စိတျ ကို သိပါတယျ ကြှနျတေျာ့ ဘယျသူ့ကို ဒုက်ခရောကျအောငျလုပျဖူးလို့လဲ ပွောလို့ မကောငျး မပွောခငျြတဲ့ အရာတှေ ကြှနျတျော တတျနိုငျသလောကျကူနပေါတယျ
ကူဖို့ကလညျး တဈခြို့ တနျးလနျးတှပေါပွောမှ သိတော့ မှာမို့လို့ပွောရပါတော့မယျ အနုပညာ သမားတိုငျးလိုလို ပါဝငျခဲ့ကွပါတယျ ပါဝငျတဲ့ အနုပညာသမားတှကေို ကယျစခေငျြတာလားထောငျ နှဈရှညျကတြဲ့လူကြ . တောထဲ သတေဲ့လူသေ ဘဝ ပကျြတဲ့ လူပကျြ . ပွီးတော့မှ စဈတပျက ယုတျမာခဲ့တဲ့ သူရဲကောငျးမြားဘှဲ့ ဆိုပွီး ပေးစခေငျြတာလား
💢အကုနျ ပကျြစီးရာ ပကျြစီးကွောငျးကို အားမပေးတာ ကြှနျတျောသိပါတယျ အခု သှေးဆူနလေို့ ဆိုတာလညျး သိပါတယျ
ဖွဈစဉျတိုငျးကို သခြော စဉျးစားရငျရပါပွီ .ပွညျသူ့ဘကျက ရှဆေုံ့းက ပါခဲ့တဲ့ အနုပညာသမားမြားကို အခုလို ဝရမျးပွေး အေးခမျြး ဘယျသူ့မှ မဖွဈစခေငျြဘူးမှတျလား ကြှနျတျော သိပါတယျ . သူတို့ ပွနျအေးခမျြးဖို့ တောငျးဆိုထားပါတယျ
သူတို့အိမျ သူတို့ယာ သူတို့မိသားစုတှနေဲ့ ပွနျနနေိုငျရငျလညျး ဒလနျလို့ မစှတျစှဲဘဲ မုဒိတာ ပှားပေးဖို့ တောငျးဆိုပါတယျ 🙏🙏🙏
သီခငျြးတဈပုဒျ စညျးလုံး စခေငျြလို့ ဆိုမိတယျ အဲ့က စလိုကျတာ နိုငျငံရေး သမားတှေ လျောဘီတှရေဲ့ ပဈမှတျ နဲ့ စောငျ့ကွညျ့ခံ ဖွဈသှားတယျ ဘာအလုပျမှ လုပျမရ အောငျအထိ ဘဝထိခိုကျသှားတယျ
စိတျဓာတျထိုးကြ. သကျသေ ခငျြစိတျတှေ ဖွဈတဲ့ အခြိနျ အဈကိုတို့ . ကြှနျတျော အခဈြဆုံး တဈသကျလုံး ရုပျရှငျ လောကရဲ့ ခေါငျးဆောငျ ဖွဈသငျ့တဲ့ဦးဌေး ( ဦးဇငျဝိုငျး ) အားပေးခဲ့တယျ . မွငျ့မွတျ ကိုခငျလိူငျ ကိုအယျကွီး နဲ့ OG Crew ပိုငျတံခှနျ . ထားပါတော့ တဈလောက လုံး နီးပါး သီခငျြးကိစ်စမှာ အားပေးခဲ့ကွတယျ
တဈခုခုဖွဈမှာဆိုးလို့ Personal အမုနျးတရားရှိသူတဈခြို့ ပိုကျဆံပေးပွီး လူကိုအန်တရာယျ ဖွဈမှာ ဆိုးလို့ အနီးကပျ စောငျ့ရှောကျဖို့ တပျမတျောက လူကွီးမှာ လုံခွုံရေးပေးခဲ့တယျ အနုပညာသမားတှကွေောငျ့ရော အဲ့အားတှကွေောငျ့ရော ပွနျထ နိုငျခဲ့တယျ ဘာ ဘောမှလညျး တဈသကျလုံး မ မခဲ့ဘူးပါ
အရငျကရော အခုထိရော မွတေဈကှကျ . ဖုနျးတဈလုံးမလြှောကျခဲ့ဖူးပါ . မရ ခဲ့ ဖူးပါ ဒီ အရေးခငျးကွီးဖွဈတော့ ကွားအညှပျဆုံးက ကြှနျတျော ပါ . သီခငျြးထဲက ရညျရှယျခကျြနဲ့ စာသားမှာ အာဏာသိမျးတာ တဈခု မှ မပါပါ
အခု အရေးခငျးမှာ ကြှနျတျောအိမျမှာဝငျပုနျးတဲ့လူတှေ လုံခွုံတဲ့ နရောကိုကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ပို့ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ လူတှမေနညျးပါဘူး သိမှာပါ .
ဒလနျ ဆို နရော လိပျစာပေးအောကျတနျးစား အလုပျလုပျမှာပေါ့ အခု ကြှနျတေျာ့ကို သားလို ခဈြတဲ့ ဦးဇငျဝိုငျး ကြှနျတျောက လညျး အဖလေို ခဈြတဲ့ ဦးဇငျဝိုငျး ဆန်ဒပွဖို့ ၈ ရကျနကေ့ အစညျးရုံးကို ကြှနျတျောလာမယျပွောတော့ ကြှနျတျော လာရငျ တဈခြို့ စိတျခုမှာ ဆိုးလို့ ပွတျပွတျသားသား မလာဖို့ ပွောခဲ့တာ ဦးဇငျဝိုငျး အဲ့အခြိနျက စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ
ဒါပမေယျ့ ခဈြပွီးသားပါ ကြှနျတျော နဲ့ မသိတဲ့ လူတှတေောငျ ကြှနျတျော ကူညီနတော . ကြှနျတျော နဲ့ရငျးနှီးတဲ့ လူ ခဈြခငျတဲ့လူကို မကူညီဘဲ နနေိုငျပါ့မလား ကိုကြျော အဈကို အဖေ နဲ့ အဆကျသှယျမရသေးလို့ ဒီ လို အထငျဆောငျးတာပါ ဘာကောငျ မှ မဟုတျပမေယျ့ နှုတျ ၏စောငျမခွငျးကွောငျ့ ဦးဌေးကို ဖမျးတာ ၂၄ နာရီ မပွညျ့ခဲ့ပါဘူ
ပွနျလှတျတာ ဦးဌေးက ပွနျရငျ ဒလနျ အထငျခံရမှာဆိုးလို့ ဧညျ့ရိပျသာမှာ အေးခမျြးစှာ နားနပေါတယျ . ဒါဝမျးသာစရာပါ ကြှနျတေျာ့ သီခငျြး ကိစ်စမှာ တဈနှဈပိတျတာ ဦးညီပါ ဦးဌေး မဟုတျပါဘူးရှေးကောကျပှဲမတိုငျမီမှာ တပျကို သှားပုပျခတျတဲ့ မနျ့တဈကွောငျးကွောငျ့ ဦးညီညီ ထှနျးလှငျကို ၅၀၅ ကပျဖို့ ပါပါတယျ
အကွိမျကွိမျ တောငျးပနျပေးတာ ကြှနျတျောပါ ဦးညီ ၅၀၅ မှာမပါတော့ပါဘူး . ကြှနျတျောကူညီ ပွောဆို တောငျးပနျခဲ့တာ ဦးညီ လညျး မသိခဲ့ပါဘူး ဒီအရေးခငျးမှာ ရုပျရှငျလောကသားတှကေို ပွနျဦးဆောငျတာ ဦးဌေးပါ ငှေ ကွေး စီးဆငျး မှုမရှိဘူး
ဘယျသူ့ဆီက မှ CDM . CRPH အတှကျ အလှူမခံထားတဲ့ အတှကျ . အသကျအရှယျလညျးရနတေဲ့ အတှကျရော ဦးဌေးကို ခဏထိနျး စဈဆေးတာ ၂၄ နာရီ မပွညျ့ခဲ့ပါဘူး. နောကျခဈြလှစှာသော လူကွီးတဈယောကျလညျး ပွနျရငျ ဒလနျ ဖွဈမှာဆိုးလို့ မပွနျရဲကပြါဘူး
ကိုကြျောကြျော ကိုယျတိုငျလညျး ပွေးနရေတာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ တပျက လူတှေ ဖမျးပွီး အပွဈမရှိလို့ ပွနျလှတျတဲ့ အနုပညာရှငျတိုငျးကို ဒလနျ လို့မစှတျစှဲ ဖို့ မတ်ေတာရပျခံ ပါတယျ
သူတို့လညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျက တကယျကွီးကို အားထညျ့ပွီး ပါဝငျခဲ့ကပြွီးပွီလေ ဒုက်ခထပျရောကျစခေငျြတာလား အေးအေးခမျြးခမျြး ပဲ မွငျခငျြတာလား စဉျးစားပေးကပြါ ထူးခွားကို စဈကား ၁၀စီးလောကျနဲ့ ပိတျအဖမျးခံရတာ အားလုံး အားလုံးထပျ စောပါတယျ
နောကျတဈနာရီ နေ ထပျပွီး ပွောပါမယျ မွငျ့မွတျ အိမျထဲ ကို စဈအငျအား ရဲအငျအား အလုံးရငျးနဲ့ ဝငျတာတော့ သိပွီးသားဖွဈမှာပါ ကြှနျတျော တဈသကျလုံး ဒုက်ခရောကျတဲ့ လူတှကေို တတျနိုငျတဲ့ဘကျက ရှိတဲ့ အားနဲ့ ကူညီနတေဲ့လူပါ .ဘယျသူ့ကို ယုတျမာ ဖူးလို့လဲ .” လို့ ပွနျလညျခပြွေထားတာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးဆိုတဲ့ ပါလေရာငါးပိချက်ကတော့ ပြန်ပေါ်လာပြန်ပါပြီနော်။ သူလုပ်သမျှတွေက လူတွေအဆဲခံရအောင်ကို တမင်လုပ်နေသလိုပါပဲ။
အခုလည်း မင်းသားမင်းမော်ကွန်းက သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်တာကြောင့် ထိမိစွာဖြင့် ဆဲလိုက်ပါပြီ။
ယုန်လေးကလည်း သူ့အပေါ်ဆဲဆိုနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဆရာကြီးလုပ်ကာ ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပါပြီ။
” ဒါကျွန်တော် အချစ်ဆုံး အစ်ကို ထဲက တစ်ယောက် ကိုမင်းမော်ကွန်းပါ . ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းအားပေးတယ် .ငါတို့ အားလုံးရဲ့ မြေ သီချင်းတုန်းကလဲ ကျွန်တော့် ဘက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ အစ်ကိုပါ တခြားလူတွေ ဝိုင်းဆဲတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်
အရည်ထူနေပါပြီ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ဆဲတာတော့ စိတ်ထိခိုက်ပါတယ် အစ်ကို ကျွန်တော် စိတ် ကို သိပါတယ် ကျွန်တော့် ဘယ်သူ့ကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖူးလို့လဲ ပြောလို့ မကောင်း မပြောချင်တဲ့ အရာတွေ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက်ကူနေပါတယ်
ကူဖို့ကလည်း တစ်ချို့ တန်းလန်းတွေပါပြောမှ သိတော့ မှာမို့လို့ပြောရပါတော့မယ် အနုပညာ သမားတိုင်းလိုလို ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် ပါဝင်တဲ့ အနုပညာသမားတွေကို ကယ်စေချင်တာလားထောင် နှစ်ရှည်ကျတဲ့လူကျ . တောထဲ သေတဲ့လူသေ ဘဝ ပျက်တဲ့ လူပျက် . ပြီးတော့မှ စစ်တပ်က ယုတ်မာခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းများဘွဲ့ ဆိုပြီး ပေးစေချင်တာလား
💢အကုန် ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကို အားမပေးတာ ကျွန်တော်သိပါတယ် အခု သွေးဆူနေလို့ ဆိုတာလည်း သိပါတယ်
ဖြစ်စဉ်တိုင်းကို သေချာ စဉ်းစားရင်ရပါပြီ .ပြည်သူ့ဘက်က ရှေ့ဆုံးက ပါခဲ့တဲ့ အနုပညာသမားများကို အခုလို ဝရမ်းပြေး အေးချမ်း ဘယ်သူ့မှ မဖြစ်စေချင်ဘူးမှတ်လား ကျွန်တော် သိပါတယ် . သူတို့ ပြန်အေးချမ်းဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်
သူတို့အိမ် သူတို့ယာ သူတို့မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်နေနိုင်ရင်လည်း ဒလန်လို့ မစွတ်စွဲဘဲ မုဒိတာ ပွားပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် 🙏🙏🙏
သီချင်းတစ်ပုဒ် စည်းလုံး စေချင်လို့ ဆိုမိတယ် အဲ့က စလိုက်တာ နိုင်ငံရေး သမားတွေ လော်ဘီတွေရဲ့ ပစ်မှတ် နဲ့ စောင့်ကြည့်ခံ ဖြစ်သွားတယ် ဘာအလုပ်မှ လုပ်မရ အောင်အထိ ဘဝထိခိုက်သွားတယ်
စိတ်ဓာတ်ထိုးကျ. သက်သေ ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန် အစ်ကိုတို့ . ကျွန်တော် အချစ်ဆုံး တစ်သက်လုံး ရုပ်ရှင် လောကရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သင့်တဲ့ဦးဌေး ( ဦးဇင်ဝိုင်း ) အားပေးခဲ့တယ် . မြင့်မြတ် ကိုခင်လိူင် ကိုအယ်ကြီး နဲ့ OG Crew ပိုင်တံခွန် . ထားပါတော့ တစ်လောက လုံး နီးပါး သီချင်းကိစ္စမှာ အားပေးခဲ့ကြတယ်
တစ်ခုခုဖြစ်မှာဆိုးလို့ Personal အမုန်းတရားရှိသူတစ်ချို့ ပိုက်ဆံပေးပြီး လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်မှာ ဆိုးလို့ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ဖို့ တပ်မတော်က လူကြီးမှာ လုံခြုံရေးပေးခဲ့တယ် အနုပညာသမားတွေကြောင့်ရော အဲ့အားတွေကြောင့်ရော ပြန်ထ နိုင်ခဲ့တယ် ဘာ ဘောမှလည်း တစ်သက်လုံး မ မခဲ့ဘူးပါ
အရင်ကရော အခုထိရော မြေတစ်ကွက် . ဖုန်းတစ်လုံးမလျှောက်ခဲ့ဖူးပါ . မရ ခဲ့ ဖူးပါ ဒီ အရေးခင်းကြီးဖြစ်တော့ ကြားအညှပ်ဆုံးက ကျွန်တော် ပါ . သီချင်းထဲက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စာသားမှာ အာဏာသိမ်းတာ တစ်ခု မှ မပါပါ
အခု အရေးခင်းမှာ ကျွန်တော်အိမ်မှာဝင်ပုန်းတဲ့လူတွေ လုံခြုံတဲ့ နေရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပို့ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ လူတွေမနည်းပါဘူး သိမှာပါ .
ဒလန် ဆို နေရာ လိပ်စာပေးအောက်တန်းစား အလုပ်လုပ်မှာပေါ့ အခု ကျွန်တော့်ကို သားလို ချစ်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်း ကျွန်တော်က လည်း အဖေလို ချစ်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်း ဆန္ဒပြဖို့ ၈ ရက်နေ့က အစည်းရုံးကို ကျွန်တော်လာမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော် လာရင် တစ်ချို့ စိတ်ခုမှာ ဆိုးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား မလာဖို့ ပြောခဲ့တာ ဦးဇင်ဝိုင်း အဲ့အချိန်က စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်
ဒါပေမယ့် ချစ်ပြီးသားပါ ကျွန်တော် နဲ့ မသိတဲ့ လူတွေတောင် ကျွန်တော် ကူညီနေတာ . ကျွန်တော် နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ လူ ချစ်ခင်တဲ့လူကို မကူညီဘဲ နေနိုင်ပါ့မလား ကိုကျော် အစ်ကို အဖေ နဲ့ အဆက်သွယ်မရသေးလို့ ဒီ လို အထင်ဆောင်းတာပါ ဘာကောင် မှ မဟုတ်ပေမယ့် နှုတ် ၏စောင်မခြင်းကြောင့် ဦးဌေးကို ဖမ်းတာ ၂၄ နာရီ မပြည့်ခဲ့ပါဘူး
ပြန်လွှတ်တာ ဦးဌေးက ပြန်ရင် ဒလန် အထင်ခံရမှာဆိုးလို့ ဧည့်ရိပ်သာမှာ အေးချမ်းစွာ နားနေပါတယ် . ဒါဝမ်းသာစရာပါ ကျွန်တော့် သီချင်း ကိစ္စမှာ တစ်နှစ်ပိတ်တာ ဦးညီပါ ဦးဌေး မဟုတ်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ တပ်ကို သွားပုပ်ခတ်တဲ့ မန့်တစ်ကြောင်းကြောင့် ဦးညီညီ ထွန်းလွင်ကို ၅၀၅ ကပ်ဖို့ ပါပါတယ်
အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ပေးတာ ကျွန်တော်ပါ ဦးညီ ၅၀၅ မှာမပါတော့ပါဘူး . ကျွန်တော်ကူညီ ပြောဆို တောင်းပန်ခဲ့တာ ဦးညီ လည်း မသိခဲ့ပါဘူး ဒီအရေးခင်းမှာ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကို ပြန်ဦးဆောင်တာ ဦးဌေးပါ ငွေ ကြေး စီးဆင်း မှုမရှိဘူး
ဘယ်သူ့ဆီက မှ CDM . CRPH အတွက် အလှူမခံထားတဲ့ အတွက် . အသက်အရွယ်လည်းရနေတဲ့ အတွက်ရော ဦးဌေးကို ခဏထိန်း စစ်ဆေးတာ ၂၄ နာရီ မပြည့်ခဲ့ပါဘူး. နောက်ချစ်လှစွာသော လူကြီးတစ်ယောက်လည်း ပြန်ရင် ဒလန် ဖြစ်မှာဆိုးလို့ မပြန်ရဲကျပါဘူး
ကိုကျော်ကျော် ကိုယ်တိုင်လည်း ပြေးနေရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တပ်က လူတွေ ဖမ်းပြီး အပြစ်မရှိလို့ ပြန်လွတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တိုင်းကို ဒလန် လို့မစွတ်စွဲ ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပါတယ်
သူတို့လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တကယ်ကြီးကို အားထည့်ပြီး ပါဝင်ခဲ့ကျပြီးပြီလေ ဒုက္ခထပ်ရောက်စေချင်တာလား အေးအေးချမ်းချမ်း ပဲ မြင်ချင်တာလား စဉ်းစားပေးကျပါ ထူးခြားကို စစ်ကား ၁၀စီးလောက်နဲ့ ပိတ်အဖမ်းခံရတာ အားလုံး အားလုံးထပ် စောပါတယ်
နောက်တစ်နာရီ နေ ထပ်ပြီး ပြောပါမယ် မြင့်မြတ် အိမ်ထဲ ကို စစ်အင်အား ရဲအင်အား အလုံးရင်းနဲ့ ဝင်တာတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ကျွန်တော် တစ်သက်လုံး ဒုက္ခရောက်တဲ့ လူတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ရှိတဲ့ အားနဲ့ ကူညီနေတဲ့လူပါ .ဘယ်သူ့ကို ယုတ်မာ ဖူးလို့လဲ .” လို့ ပြန်လည်ချေပြထားတာပါ။